Double Row Bhora Slewing Kubereka Fekitori - China Double Row Bhora Slewing Kubereka Vagadziri, Vatengesi
Inorema basa michina yaishandiswa slewing mhete kutakura
Kana iwe uchida rinorema basa slewing kutakura, tinokukurudzira iwe yedu Yechipiri-mutsara bhora slewing inotakura Matatu-mutsara roller kutwasuka kutakura.
Ivo vaigona kutakura yakakura axial kurodha uye radial kurodha. Inonyanya kukodzera michina inorema inoda madhaimeta mahombe.
Zvakadai sekuchera mabhaketi emabhagidhi nemavhiri emhando yemakondo, makwara engarava, makwara epachiteshi, simbi yakanyungudika inomhanya mapuratifomu uye makuru-matani emakori emakori uye mimwe michina.
kaviri mutsara akasiyana bhora saizi slewing inotakura isina giya 020.25.500
Turntable inobereka, inozivikanwa seye slewing kubereka, iri mhando hombe kubereka iyo inogona kutakura hombe axial mutoro, TOUR mutoro uye kupidiguka nguva panguva imwe chete. Turntable mabheyari anowanzo kuve akashongedzerwa nekukwiridzira maburi, emukati kana ekunze magiya, ekuzora mafuta maburi uye ekuisa chisimbiso michina, kuitira kuti hinjini huru dhizaini dhizaini iumbane, gwara rakavimbika uye kugadzirisa kuri nyore.
Kune mana poindi yekubata bhora mabheyaringi ane kana asina mazino, mazino ekunze uye mazino emukati, mitsara miviri angular kuonana bhora mabheyaringi, muchinjikwa cylindrical roller mabheyari, muchinjikwa tapered roller mabheyari uye matatu mitsara cylindrical roller inosanganisa rotary mabheyaringi. Pakati pavo, ina poindi yekuonana bhora inotakura ine yakakwira yekumira mutoro unokwanisa; muchinjikwa cylindrical chinotenderera inobereka ine yakakwira inesimba mutoro kugona; muchinjikwa tapered chinotenderera inobereka anogona kuita inobereka vane zvikuru rutsigiro Rigidity uye dzakakwirira kutenderera kururama kuburikidza pre chipingaidzo.
Rotary inobereka inoshandiswa zvakanyanya mukusimudza michina, michini yekumigodhi, michina yekuvaka, chiteshi chengarava, michina yechikepe, yakakwira-chaiyo michina yemadhiya uye chombo chinokanda uye mamwe madhiraivhoni makuru.
Yemukati giya rakapetwa kaviri bhora dhayamita slewing inotakura 023.40.1250
Iko kusimuka kwekutakura kunotakura kunobva pakushaiwa kwekumhanyisa kumhanya uye mutoro unorema uye chiito chehukuru hwakakura uye hukuru hukuru hwekutenderera. Zvinonzi slewing kubereka iri mhando hombe kubereka pamwe inokosha mamiriro, izvo zvinogona kutakura muhombe axial mutoro, TOUR mutoro uye kupidiguka nguva panguva imwe chete, uye ane akawanda mabasa akadai rutsigiro, kutenderera, hutachiwana uye fixation. Iyo slewing inobereka chishandiso inogona kutakura yakawanda mitoro, inosanganisira kushanda mutoro, wakafa uremu mutoro, mutsereji mutoro, kudhumhana mutoro, tembiricha mutoro uye zvichingodaro. Izvi zvinotevera kuongororwa kwakajeka kwemutoro weakasiyana machira anotakura zvigadzirwa.
kaviri mutsara bhora slewing rinotakura rakasiyana bhora dhayamita 021.40.1400
Iwo maviri mutsara bhora mhando slewing kubereka ane matatu zvigaro mhete. Iyo simbi bhora uye yekuzviparadzanisa block inogona kuburitswa yakananga kune yekumusoro uye yakadzika mijaho. Zvinoenderana nemamiriro echisimba, mitsara miviri yesimbi mabhora ane mahupamhi akasiyana akarongedzwa.
Iyi mhando yegungano rakavhurika iri nyore kwazvo. Iwo maAngles anotakura ekumusoro uye ezasi arc mijaho ari 90 ° uye inogona kutakura rakakura axial simba uye kupidigura nguva. Kana iyo radial simba iri rakakura kupfuura 0.1 nguva yeaxial simba, iyo nzira yemigwagwa inofanira kuve yakanyatsogadzirwa. Iyo mbiri volleyball mhando slewing inotakura ine yakakura axial uye radial saizi, uye ine yakasimba solid. Inonyanya kukodzera kurodha uye kudzikisa michina seshongwe crane uye rori crane ine yepakati kana pamusoro dhayamita.
XZWD Double mutsara bhora Huru kugona Slewing Mhete Kubereka
1. Double row bhora slewing rinotakura rine matatu zvigaro zvindori
2. Double mutsara bhora slewing kubereka vane yakakura raxial uye TOUR saizi
3. Doule mutsara bhora slewing rinotakura rine differnet dhayamita bhora rakaumbwa uye rakaenzana dhayamita bhora rakaumbwa
4. Double mbishi mbichana slewing kubereka kunyanya kushandiswa kondo uye zvegungwa michina
Wanda Double Row Bhora Slewing Mhete Kubereka Kunze Kwemazino Kuzeya Kubereka Kutenderedzwa Turntable Kupa
1.Raw zvinhu kubva kune vanovimbika vatengesi;
3.Strict mu-maitiro mhando kutonga uye 100% apedza chigadzirwa kuongorora usati wasununguka
-Supplier manejimendi maitiro
-Kuuya kwezvinhu zvekuongorora maitiro
-Kugadzirisa kudzora maitiro
-Zvipera zvinhu uye kuuya kunoongorora